Chitima chengozi muCongo, vangangoita 50 vanhu vakarasikirwa nehupenyu - RayHaber
mushaTHE WORLDAFRICA243 CongoChitima chengozi muCongo, vangangoita 50 vanhu vakarasikirwa nehupenyu
13 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 243 Congo, AFRICA, THE WORLD, Railway, GENERAL, musoro wenyaya 0
kanenge chitima chakatsemuka mucongo
Maererano nemishumo yekutanga, vanhu vanosvika 50 vakaurayiwa mutsaona yakaitika mangwanani pakaitika chitima munzvimbo yeTanganyika kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweDemocratic Republic of the Congo.
Reuters yakatora gurukota rinowona nezvekuchengetedzwa kwevanhu, Steve Mbikayi, achiti tsaona iyi yakaitika mutaundi reMayibaridi nenguva dza3 mangwanani. Mbikayi akataura kuti vanhu vanosvika 50 vakaurayiwa mutsaona iyi, vanhu ve23 vakakuvara voendeswa kuchipatara.
Twitter Ndinotaura runyararo kumhuri dzeavo vakafa mutsaona iyi vachimiririra hurumende uye ndinoshuva kuti dai zvido zvedu zvapfuura vakakuvadzwa, Minister Bakan said on Twitter.
Zvitima zvechitima muCongo hazvina kunyatsochengetwa uye kazhinji locomotives akavakirwa pa1960s. Nechikonzero ichi, tsaona mukufambisa kwezvitima dzinokonzera kufa kwakakomba.
Mumwe munhu akaurayiwa mutsaona wechitima muKahramanmaraş 08 / 07 / 2014 vanhu vakafa chitima mutsaona muna Kahramanmaras: somugumisiro motokari ikatsva sandara kuyambuka mitoro chitima 3 rimwe vanhu vakuvara mutsaona kuti akauraya mumwe munhu akarasikirwa noupenyu hwake zvakare. Chitima mutoro-kubereka Takudzai Malatya, Adana, 4 mazuva apfuura Turkoglu dzoruwa pamwero kuyambuka muna Yenikoy munharaunda, Saleh Doğramacı Besey ekisero vakuvara pashure pokunge auraya nemotokari inoshandiswa (70), Necip Fazil City Hospital kugamuchira kurapwa akafa. Mustafa akafa paitikira tsaona ekisero, Saleh Joiner, Joiner 8 makore Joseph Baran akakuvara uye Besey yacho ekisero.
TÜLOMSAŞ akarasikirwa nehupenyu hwake semugumisiro wengozi yebasa 26 / 02 / 2013 TÜLOMSAŞ akarasikirwa nemunhu nekuda kwegasa rebasa kumabasa paEkikieehir akakuvara zvakaipisisa paakakanganiswa basa rengoro yekoro. Maererano mashoko awanika, Hoşnudiye Quarter muna Turkey locomotive uye Engine Industry sezvo Ahmet Wing Street (TÜLOMSAŞ) Saraçoğlu'nda mushandi Hussein (53), yakarohwa ne zvikamu adziviswa panguva ngoro puller. Saracoglu akakuvara zvakakomba, 112 Emergency Service makambani akabvisa Eskisehir Osmangazi University (ESOGU) Medical Faculty Hospital pasinei nekupindira muchipatara chakafa. Kunobva: www.habercinizing
Munhu akarasikirwa noupenyu hwake pamotokari yemotokari 23 / 08 / 2014 kana Rized kuitika mune waya wire motokari masuo A Life Lost: Rize Cayeli kuitika munzvimbo waya mikova waya motokari mumusha elm Township akarasikirwa noupenyu hwake vaduku. The chiitiko chakaitika ari muCentral munharaunda, mu kushanda pamwe nemhuri kune zvakasvibirira tii mapindu Ismail (16), pamwe tea akakumbira kuti chinja mutoro nezuva pazasi waya motokari waya mubindu. Sirma akadana sezvo kuda kubvisa waya motokari waya vakabata maoko kuGuri, akakwidzwa muchakavanzika Amedaki Magetsi. Cayeli Ishakoğlu kuna State Hospital nemhuri duku anotambudzika, pasinei ose kupindira akaita pano vakafa pamusana ane zvemagetsi leakage muna kurtarılamadı.teleferik Ismail mwedzi pashure rokuzvarwa öğrenildi.jandar pamusoro ...
Munhu akarasikirwa noupenyu hwake pasi pechitima 18 / 06 / 2012 The chiitiko, HalkalıNzira yekuenda kumugwagwa kuenda kune kutungamirirwa kwaSirkeci kubva kumaawa e17.45 kuenda kuchipatara cheKucukcekmece mushure mokunge makiromita 1 aitika. Mushure mokunge njodzi yacho inogadziriswa nemotokisi yechitima yakavhara chitima, yakaburuka ikabvarura pamusoro pemigwagwa ikaona murume wechidiki akafa. 155 mapurisa anomhanyira kune mapoka emapurisa nekushevedza mutsara wakaziviswa. Cherechedza pane zvakaitika kubva kumapoka emapurisa anotora matanho ekuchengetedza mukati memuviri akaongororwa. Pakupera kwekuongororwa, zvakagadzirirwa kuti munhu asina kuzivikanwa nehuzivikanwa aiva murume mumakore ake e24. Mushure memabasa emapurisa emapurisa kubva kuMaguta makuru eIstanbul ane motokari yemariro pamusoro peIstanbul
Centennial Vehicles Inoratidzwa paEzurum Gar Museum Sheds Chiedza pane Nhoroondo
Zvekufambisa Zvinobatsira zveEzurum Inowanikwa pane Nhoroondo yeSilika
Mumwe munhu akaurayiwa mutsaona wechitima muKahramanmaraş
TÜLOMSAŞ akarasikirwa nehupenyu hwake semugumisiro wengozi yebasa
Munhu akarasikirwa noupenyu hwake pamotokari yemotokari
Munhu akarasikirwa noupenyu hwake pasi pechitima
Mumwe Munhu Akagadzirwa neMetrobus Akarasika Upenyu Hwake (Vhidhiyo)
Munhu akafa muKonya pasi pe tram
13 579 akaurayiwa mumutambo wekuyambuka
1 vanhu vakarasikirwa noupenyu hwavo mukuyambuka muAydın